Ukususela kwixesha elidlulileyo, i-cream cream iyimpawu ebalulekileyo yeetafile zezonyiso. Yenziwe ngenjongo yodwa-ukunyusa ulutsha kunye nobuhle besikhumba. Kwii-boutiques zanamhlanje ezikhethiweyo zikhethiweyo zikhethiweyo ezahlukeneyo, kodwa abafazi, nokuba ngababaluleka, okanye iifashthi ezilandeleleneyo, bahlala basebenzisa iindlela zokupheka eziza kuthi zivela kwixesha elidlulileyo, kwaye bona ngokwabo benza i-cream face cream. Indlela yokwenza ukhilimu ojongene nekhaya, sifunda kule ncwadi.
Yintoni ikhilimu yasekhaya?
Ubuso bekhilimu basebenzisa iYiputa yamandulo. Yenziwe kwiimveliso zendalo, isilwanyana okanye imvelaphi yemifuno. Kwakukhona ubisi, ukhilimu, amayeza omhlaza, izityalo ezahlukeneyo kunye negazi lezilwanyana. Amacandelo akhethwe ngetyala kunye nephutha, injongo yokufunwa yayikukhetha ezo zinto ezinokulondoloza ubuhle besifazane. Ngekhulu le-19, nangona ukhetho olukhulu lweemveliso zokunakekelwa kwamehlo ahlukeneyo, imfashini yendlu, i-creams face yabonakala.
Ukhilimu lwasekhaya ngamacandelo ayo unokwahlukana:
Ikhrimu ebusayo yobuso, nayiphi na isikhumba
2 iipunile zeedilibini ezibomvu, iipunipoli ezili-10 zamanzi, iipunipoyi ezine ze-oyile, kunye ne-Vaseline, ½ izipuni ze-lanolin.
Soften lanolin, ioli kwinqanawa ngamanzi abilayo. Siphakamisa amanzi kwisitya esahlukileyo kwaye sinezela izithako ngokukhawuleza, ngelixa siqhubela phambili. Yongeza ijusi yeidiliya. Gcina kakuhle umxube uqande. Sigcina kwifriji kungabi ngaphezu kwenyanga.
U kucocwa. Umphumo omuhle ufunyenweyo xa usebenzisa i-creams kunye neenxalenye ezineenkqantosi ezinqamlezileyo (amaqabunga e-raspberry, ibhereberry, i-decoction ye-oak bark okanye i-plantain).
Uhlobo olusisigxina lweelusu ekubunjweni oluphambili, kufuneka udibanise itiye eluhlaza, ikhalenda kunye ne-chamomile. Ukuba ulusu luyakwazi ukwanda kwe-sebum, yongeza i-decoction ye-bark ye-oki. Ukulungiselela ukhilimu wesikhumba esomileyo, sibeka i-aciduronic acid, kuya kunceda ukugcina umswakama kwiiseli kunye nokujongana ngokumileyo.
Ekulungiseleleni ama-creams ehlobo nasebusika kunexesha elithile. Ebusika, kufuneka udibanise iioli ezininzi ezibalulekileyo, zinokuncedisa ukondla yonke iseli yolusu. Ehlobo, sebenzisa izityalo kunye nezitshalo zemifuno ezithatha ngobumnene amabala e-pigment kunye ne-freckles, mhlophe iitoni kwaye uhlambulule ulusu kunye neziqhamo ze-acid.
Ukhilimu o nondayo
Siza kuthatha iqanda elingu-1 ¼ ekomityi elicinyiweyo yesikrimu, ziza kubakho njenge-cream cream. Yongeza i-1 ithispoon yobusi, okuya kucebisa ukhilimu wakho ngezinto ezichasayo kunye namavithamini kunye namaconsi amathathu eoli efunekayo yomthi weeyi. Sigcina ukhilimu kwiqrijini ngokungabi ngaphezu kweentsuku ezimbini okanye ezintathu. Isixhobo esinjalo siya kubeka ngempumelelo ikhefu ebusuku.
Iikramshi ezenziwe ekhaya
Iimpawu eziphekwe ekhaya azincinci kumgangatho wokuthenga ama-creams, ukuphela komgca ukugcinwa kwexesha elifutshane. Kodwa ukuba ukhangele kuyo, ayinanto yokunciphisa, kodwa ukudibanisa, ekubeni iikrama zenziwe ngokwabo, azizinalo. Siza kukuxelela indlela yokwenza ukhilimu ekhaya, ngokukhawuleza, ngokukhawuleza kwaye kungabi neendleko ezibalulekileyo.
Ukuvelisa oku okanye ukhilimu, kufuneka uqwalasele iimpawu zesikhumba apho uza kwenza ukhilimu. Isikhumba siqhelekile, sibukhali, sisomile, sinamafutha kunye kunye.
Kuhlobo olulungele ulusu, songeza i-vitamin E, evuselelekayo kwaye eqinisekisayo.
Ikhumba elomileyo lifuna rhoqo ukutya okunomsoco kunye nokunyanzela. Isikhumba esinomdla sisetyenziselwa ikhambi elilodwa lezonyango. Ikhumba eliqhelekileyo lifuna ukuligcina njengoko liyiyo. Isikhumba esidibeneyo sidinga ukunakekelwa okhethekileyo. Isikhumba se-oily sidinga ukulungelelaniswa komsebenzi weengqungquthela ezihlambulukileyo kunye nokuhlambuluka rhoqo.
Ukujongana nekhilimu ekhaya akulukhuni ukwenza. Okokuqala, siya kuqonda ukuba ungenza njani ukhilimu wesikhumba esomileyo. Ikhumba elomileyo kufuneka lihluthe kwaye londliwe, ngoko siya kwenza ukhilimu onondla.
Masenze ukhilimu onomsoco wesikhumba esomileyo . Ukuze sikwenze oku, i-yolk siza kuthatha iglasi ye-cream egciniweyo, oku kuya kuba sisiseko. Emva koko faka 1 ithispoon yobusi kunye namaconsi amathathu eoli yetiyi. Esi sikremu sisetyenziselwa ukhilimu wobusuku, siyigcina kwindawo ebandayo, ihamba phambili kwiqrijini, iintsuku ezi-3.
Ukunyusa iCream kwesikhumba esomileyo
Sithatha ama-2 okanye ama-3 e-oyile-i-ylang ebalulekileyo, ama-2 okanye ama-3 weoli efunekayo yamanandi amnandi, ama-gram ayi-10 e-camphor utywala, i-50 gram yeoli yekakhukhunathi.
Ioli yeKononut iyancibilika kwindawo yokuhlambela amanzi, ixutywe kunye nekamphor yotywala. Yongeza ii-oyile, udibanise yonke into de iifom. Sigcina le khilimu efrijini kwiveki.
Thatha igramu e-1 ye-salicylic acid, i-½ indebe yamanzi, i-6 gram ye-gelatin, i-80 gram ye-glycerin, i-50 gram yobusi. Okokuqala, sihambisa i-gelatin emanzini kwaye songeza kwi-acid mass salicylic acid kunye ne-glycerin.
Beka isitya kwisitya samanzi ashushu kwaye ungeze ubusi. Umxube uya kupholisa, udibanise u-3 okanye ama-5 othotho lwe-ylang-ylang. Esi sikremu sisetyenziselwa njengobuso buso. Mane ubeke ubungqingili ebusweni bakho uze ushiye imizuzu eyi-10 okanye eyi-15. Ungakulibali ukuba isixhobo asigcinwanga ngaphezu kweentsuku ezi-7.
Ngesikhumba somnxeba, ukhilimu onokubambisana okukhulu, xa unxibelelana nesikhumba, le khilimu iyancipha. Ukulungiselela ukhilimu kuya kuthatha imizuzu emithathu.
Kuya kuthatha igramu ezili-10 ze-arix, i-gram e-10 yamaconsi eoli ye-rose, i-40 grams yeoli ye-alimondi, 40 ml yamanzi ase-rose. Zonke izithako zivuselelwa kwaye zisetyenziswe kwesikhumba. I-khilimu ikhiqiza umsebenzi weengqungquthela ezihlambulukileyo.
Igrama yesikhumba esibuhlungu
Esi sikhilimu sinokubunjwa: iibhotile ezi-2 zebhotile, i-tablespoons ezine ye-rose rose, i-90 ml yeoli ye-almond, i-drops 6 yeoli ye-sandalwood. Sidibanisa yonke into size sivumele ukhilimu ukuma iiyure eziliqela kwindawo ebandayo, ngoko kuya kulungele ukusetshenziswa.
Igrama yentlalo ehlanganisiweyo
Ngaloo ngozi, sincoma ukhilimu ogcinwe ixesha elide. I-cream, i-camphor utywala, amanzi anelisekile nge-lemon peel, i-linetol, i-yolk 1, ioli ye-castor kunye nejisi lemon. Zonke izithako zixutywe, ubukhulu bongezelelwe ngamehlo. Emva kokusebenzisa le khrimu, ulusu luyakulula lube lube buthathaka, umbala wesikhumba uqhelekileyo, kwaye umgudu ukhuselwe.
I-Toning cream entanyeni kunye nobuso kuyo nayiphi na uhlobo lolusu
Thatha amaconsi ama-10 eoli efunekayo, 10 ml ye-glycerin, 30 g ye-arix, 10 ml yeoli ye-jojoba, i-50 ml yeoli ye-almond, i-50 ml yeoli ye-avocado, i-200 ml yamanzi abilayo, i-1 teaspoon ye-chamomile eyomileyo.
Thatha i-chamomile uze uyibeke kwindebe, uyizalise ngamanzi abilayo. Sifaka imizuzu eyi-15 kwifom evuliwe. Ukunyamezela kwelinye indebe. Esipokeni esenziwe ngeglasi engagangekiyo, sitshisa ngomlilo othobayo 3 iintlobo zamafutha kwaye sitshabalalisa i-bex. Susa emlilweni uze udibe ngamanzi kuye kulo mxube we-30 ml we-infusion efudumele, de uze ukhilimu uphenduke ube bunzima obukhulu. Yongeza ioli kunye ne-glycerol. Sifaka iziqulatho kwisitya kwindawo kwaye siyibeke kwindawo emnyama, kungekho iintsuku ezi-14.
Cream Cream ebusweni, nangaluphina uhlobo lolusu
Thatha i-pinn ye-borax, i-1 teaspoon ye-glycerin, i-tablespoons ezi-4 zejisi yekhukhamba, i-tablespoons e-5 yeoli ye-vasel, i-tablespoons ezine yeoli ye-almond, i-3puni yepuni.
I-Wax kunye neoli iyancibilika kwiiglasi ezingenakunqanda ukutshisa, ngelixa kwesinye isikebhe esahlukileyo sitshisa i-borax, i-glycerin, ijisi lekhukhamba. Xa iziqulatho zombini zityholisa kunye nokufudumala, faka i-1 drop of wax, ioli kunye namanzi, qhubela phambili. Sisusa kwaye sidibanise de kube umxube uqande, kwaye kuya kupholisa. Sigcina i-khilimu kwijeli evaliweyo kwiqrijini, iintsuku ezintathu okanye ezine.
Ikhrimu yokukhusela iqhelekileyo yokomisa isikhumba
Esi sikhilimu sifanelekile kubaqalayo, kulula ukulungiselela kwaye ayifuni inani elikhulu lezithako, ikhefu ye-oyile yeklasi. Unomphumo wokuvuselela, ukuphucula kunye nokunciphisa. Efanelekile kwesikhumba esomileyo, esikhulayo, esincinci nesiqhelekileyo. I-khilimu iyancibilika elukhumbeni, kuyamnandi ukuyisebenzisa.
Thatha amaconsi ama-3 eoli efunekayo ye-rosewood, ama-2 amaconsi eoli ebalulekileyo ye-patchouli, iispuni ezimbini ze-shea bhotela, i-1 ithispoon ye-jojoba ioli, i-1 teaspoon ye-avocado ioli, ii-2 teaspoon zeoli ye-macadamia.
Gcoba amanzi kwindawo yokuhlamba ibhotela, faka i-oyile yemifuno yemifuno, udibanise uze ungeze iioli eziyimfuneko. I-cream ephelileyo ifakwe kwisifriji. Sigcina loo mveliso kwifriji.
Sifanele sazi indlela yokwenza ukhilimu wekhaya. Siyabulela kulezi ndlela zokupheka ezilula, unokwenza ukhilimu lwasekhaya, oqinisekileyo oyithandayo.
Ikhaya leMask for Skin's Skin
Ukujongana nokunyamekela, izigulane zabantu
Ubuhle ngeempendulo ezidumile
Iipatato ngenyama enomthi
Indlela yokuhlala enhle ngexesha lokushisa?
Bagula njani amadoda namabhinqa?
Izimpendulo kwimibuzo yabamama abalindele